Maqaal codsi ah : Sidaan ugu biiray Wasaaradda Warfaafinta & Xogo kale oo xiiso badan. | Somaliland Today
← “Shiinaha Ayaanu Berbera Saldhig Militari Ka Siinayna,” Xildhibban Nac-nac
Dawladda Imaraadka Oo Hanjabaad Adag Ugu Goodiday Xukuumadda Jabuuti →
Waxa Ingiriiska socdaal ku yimi Badhasaabkii Gobolka Maroodi jeex Axmed Cumar Cabdilaahi (Xamarji) waaka nool, isaga na heshiisiiyay Xukuumaddii Siilaanyo, isaga igula shiray Ingiriiska, halkaas markay maraysay waxa 2011-Kii ila soo wada hadlay Xamarji iyo Baashe Cawil wakiilka Somaliland u fadhiya Imaraadka, waxay igu yidhaahdeen Tv-gii Qaranka Yurub ayuu soo gaadhay inaad ka hawlgasho ayaanu garanay, waxaan ku idhi alle waa ogaa “Mareeyaha Tv-ga ee Yurub may siinaysaan”? Waxay igu yidhaahdeen mayee Axmed Faarax Wasiir ayuu leeyahay ee lakiin odayaasha TV-ga ee Yurub ayaad noqon, waxaan ku idhi “Waayahay ee haw soo magacaabina qof Wasiir Dawladda ugu jiro “.
Shaqaalihii Ingiriisku sidaa ayay noqdeen oo Somaliland u dhantahay Xaji . Markaan yaabay Xirsi Cali Xaji Xasan oo marka lana heshiisiiyay ayaan ku idhi “Waar Studio labaad aan Caasimadda labaad ee Ingiriiska Birmingham ka furo oo TV-ga Qaranka ah oo xooga Somaliland-tii kale ee xagga London ka dhinayd aan halkan ka hawlgaliyo “. Wuxuu igu yidhi dawladdu kaas London ayay ku kharash garowdo lacag lama hayo . Wallahay raggii joogay ayaa ogaa anaa jeebkayga ka qalabaystay, Ayuuto aan qaatay waa halkii rer Xamarkee ayaan ku kharash gareeyay. Waxaan shaqada qoray Wariye Daahir Xaji Ismaciil (Daahir Curi) ninkii garanaya garanaya Wariye ruug cadaaya (Waaxid Ciidagle) ilaa hadda wuu shaqeeya iyo Dayib Yare oo Sawir qaade aha (Ciidagale) Studio gii Birmingham ilaa hadda wuu shaqeeya Daahir Curi ayaa maamula.
Marka lay diidaayo Studio-ga Birmingham, Faysal Cali Sheekh Shir lagu qabanaayay Washington USA oo Somaliland ah ayuu isagoo Ingiriiska jooga Xukuumadda ku yidhi xafiiska Dahabshiil ee London 50,000$ iiga amaahda Kamarado ayaan ugu iibinaya xafiiska Washington ee Tv-ga Qaranka oo uu yidhi Waxaan u magacabaay wiil Samiir la odhanjiray, oo Bah-gobo aha. Waa laga ammaahday, Raahiid Gaaruf wuu nool yahay Safiirka Somaliland ee Maraykanka markii aanu tagnay 2014-Kii ayaan ku idhi “Safiir Raahiid Gaaruf meeye qalabkii TV-ga Qaranka ee Washington iyo xafiiskii Faysal Cali Sheekh furay ee 50,000$ ku baxday “? Wuu noolyahay Aniga Xafiiskaasi ima soo gaadhin ayuu yidhi .